एक समुद्र तटमा के लगाउने: सारा अली खानबाट टेकअवेज - सेलेब स्टाइल
एक समुद्र तटमा के लगाउने: सारा अली खानबाट टेकअवेज
What Wear Beach
उखु तिम्रो लागि राम्रो छ
सारा अली खानको मौसमी इन्स्टाग्राम सौंदर्य राम्रोसँग उज्ज्वल रंग, सुनौलो बालुवा, र #SaraKiShayari को एक लगातार आपूर्तिको रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ। अभिनेताको मनपर्दो छुट्टी गन्तव्य माल्दिभ्स हो, र हामी प्रत्येक वर्ष उनको परिवारको साथ उष्णकटिबंधीय टापुमा बारम्बार भेट्न मन पराउँदछौं। यी वार्षिक, कहिलेकाँही द्विवार्षिक, ट्रिपहरू सबै फेशन अफिकियान्डोहरूको लागि पनि ठूलो प्रेरणा हुन्।
केहि दिन अघि साराले एक हप्ता भोम्मुली टापुमा बिताउन थालिन्, र उनीसँग केही स्वोन योग्य, फोमो-प्रेरक पोशाकहरू लिएर आईन्। सावधानीपूर्वक क्युरेट गरिएको ensembles रंग र सिल्हूटको विविध मिश्रण थियो। फ्लोरल र ज्यामेट्रिक-प्रिन्ट गरिएको बिकिनी, एक-टुक्रा स्विमसूट्स, सारंग्स र रेट्रो नारंगी हुड सनग्लासदेखि काफ्तान ड्रेस, स्टेटमेन्ट फ्ल्याट्स, लेयर्ड ज्वेलरी र मक्सी लुगाहरू, सूर्यका समुद्री तटहरू बिरूद्ध आश्चर्यजनक तस्बिरहरूको लागि बनेको पोशाकहरू। अमी पटेल र तान्या घावरीले स्टाइल गरेकी साराको वार्डरोबले पक्कै टाढाको टापुमा लामो यात्राको लागि हाम्रो चाहनालाई धक्का दियो।
उनी धेरै जसो समुद्री तटमा घुमाउरो कर्लका साथ गोलाकार देखिन्छिन्, केवल उनको काफ्तान पोशाकको साथ नम। काट-आउटहरू, जुत्ता विकल्पहरू र असममित हेम्सले उनको टोन्ड बडी देखायो। भिन्टेज फ्लोरल र टेक्निकोलर प्रिन्ट्सको मेडले विशेष आकर्षक थियो, र परिचित स्विमवेयरलाई जीवनको नयाँ लीज प्रदान गर्‍यो। काफ्तानको सिल्हूटहरू र म्याक्सी पोशाकको पुनर्मिलनले अलमारीलाई अझ बढी फेमिनिज गर्दछ।
क्रस्टक्रस विवरण बस्टमा, एडिजी सनग्लासहरू, एक-काँधमा काटिन्छ र मोहित शेड्स र टिन्ट्सले हामीलाई अधिकको लागि हाम्रो स्क्रीनमा स्वाइप गर्यो। के तपाईं पुलको नजिकै बस्न चाहनुहुन्न, डिजाइनर नम्बरमा, क्यापिरिंहमा सिप्पिंग गर्दै अहिले? ठिक छ, तपाईं ती टिकट बुक गर्दा, यहाँ निम्न गतिविधिहरु को आनंद को बारे मा के लगाउने को बारे मा तल छ।
प्रेरणाका लागि सारा अली खानको छुट्टीको अलमारी हेर्न तल स्क्रोल गर्नुहोस्।
यो असममित हेमको साथ, Verandah द्वारा यो काफ्तान पोशाक शैम्पेन मा एक दर्शन हो। टोरी बर्च फ्ल्याटसँग मिल्दो जोडीले हेराई बढि विस्तार गर्‍यो। यदि रातको विषयवस्तु बोहेमियन ठाडो थियो, साराले निश्चित रूपमा यसलाई नेल गरे।
शैली सल्लाह: यदि तपाईं दिन देखि रात हेर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, प्लेटफर्म हिलको लागि फ्ल्याटहरू बदल्नुहोस्, र तपाईंको मनपर्ने सुन्दरतामा सुनको गहना जोड्नुहोस्।
शिवान र नररेसको नयाँ संग्रह 'कर्ट' बाट सारंग र बिकिनीमा सारा स्टन्सनहरू। बोल्ड प्रिन्टहरूको यो समन्वय सेटमा, उच्च-कम्मरको टुप्पोमा लि wor्क-विस्तृत शीर्ष लगाइएको शो चोर हो।
यो शिवन र नरेश नम्बर एक एक्लेक्टिक प्रिन्ट र संतृप्त समर र withको साथ नै न्यानो ट्यानको सपनाहरू बनेका हुन्छन्। हामी यसलाई अहिले हाम्रो शपिंग कार्टहरूमा थप्दैछौं हाम्रो सुझाव छ कि तपाईंले पनि गर्नुहोस्!
साराले फेन्सी डिनरका लागि लेबल वर्बद्वारा सुनको उच्चारणको साथ एक चमकदार मैक्सी पोशाकको लागि रोजिन्। तहसहित, सुनको हारले चाँदनीलाई प्रतिबिम्बित गर्छिन्, जसले उनलाई प्राकृतिक चमक दिन्छ।
शैली सल्लाह: स्ट्रिप्पी फ्लैट्सको एक जोडी जोड्नुहोस्, र छेउमा स्वीप गरिएको हेयरस्टाइलको साथ हेराई बन्द गर्नुहोस्। नेकलेसको ठाउँमा स्टेटमेन्ट इयररिंगहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्।
यो फूल हो, यो पानीको निलो संग मेल खान्छ, र यो कम्मर को साथ एक काट-आउट विवरण छ। यो टिकाऊ भेनी वेदी अमावी मोनोकिनी ईशा लाल स्विमवेयरले यस फ्रेममा पूर्ण रूपमा फिट गर्दछ।
साराको हावालो र सजिलो छुट्टीको वार्डरोब हाम्रो पिन्टेरेस्ट बोर्डहरूमा हुनेछ जबसम्म हामी एउटा गेटवे कार वा उडान फेला पार्दैनौं। तिम्रो के छ?
यो पनि पढ्नुहोस्: तपाईंले नताशा डलालको विवाहको पोशाकको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा
अनुहार साइड इफेक्ट मा बेकिंग सोडा
महिलाको लागि पेटको बोसो गुमाउन व्यायाम गर्नुहोस्
अनुहारमा बेकिंग सोडा को साइड इफेक्टहरू
कपाल झर्ने र डन्ड्रफको लागि घरेलु उपचार